Batisa - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Batemy)
Ny batisa / batemin' i Kristy, sary nataon' i Jan van Scorel (1527)
Ny batisa na batemy dia fomba andraisana ny olona ho mpikambana ao amin' ny fivavahana iray, toy ny kristianisma sy ny jodaisma, izay tanterahina amin' ny fampiasana rano natao handena ny loha fara-fahakeliny na ny tena manontolo. Amin' ny ankapobeny, eo amin' ny fivavahana kristiana dia atao amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny batisa. Isan' ny atao hoe sakramenta na fanomezam-pahasoavana ny batisa. Ny Filazantsara dia milaza fa i Jesoa koa dia natao batisa ka i Joany (na Jaona) no nanao batisa azy.
2 Ny batisa araka ny Baiboly
2.1 Ny batisa ao amin' ny Testamenta Taloha
2.2 Ny batisa araka ny Testamenta Vaovao
3 Ireo endrika anatanterahana ny batisa
3.1 Batisan-jaza sy batisan'ny mino
3.1.1 Ny batisan-jaza
3.1.2 Ny batisan'ny mino
3.2 Batisan' ny rano sy batisan' ny Fanahy Masina
3.2.1 Batisan' ny Fanahy Masina
Ny teny hoe batisa ampiasain' ny Protestanta malagasy dia avy amin' ny teny anglisy hoe baptism. Ny hoe batemy ampiasain' ny Katolika malagasy kosa dia avy amin' ny teny frantsay hoe baptême. Ireo teny roa ireo (baptism sy baptême) dia avy amin' ny teny latina hoe baptismus na baptisma izay avy amin' ny teny grika hoe βάπτισμα / baptisma. Ity indray dia avy amin' ny matoanteny grika hoe βαπτίζειν / baptizein izay avy amin' ny matoanteny grika hafa hoe βάπτειν / baptein izay midika hoe "mandentika (anaty rano na anaty tsiranoka hafa)".
Ho an' ny Kristiana, ny batisa dia tsy nijanona ho fanatsobohana anaty rano fa fitomoerana ao amin' ny Fanahy Masina.
Ny batisa araka ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Ny batisa ao amin' ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]
Ny Lalàna jiosy dia manafatra ny fampiasana ny rano mba hidiovana (Lev. 11.25-40 ; 15.5-7). I Elia dia nandidy ny jeneraly siriana atao hoe Namàna handro ao amin’ ny onin’ i Jordana mba ho sitrana amin’ ny habokany (2 Mpanj. 10). Talohan’ ny nahatongavan' i Jesoa Kristy dia nasaina niroboka an-drano ireo olona niova finoana ho amin’ ny fivavahana jiosy ho mariky ny fidirany ao amin’ ny fanekem-pihavanana. Ny mpaminany sasany dia nihevitra fa ireo Jiosy babo miverina ho olona afaka eo amin’ ny taniny indray dia tokony hiampita ny onin' i Jordana mba ho lenan’ ny rano ka ho voadio amin’ ny fahotany alohan’ ny hahatongavan’ ny Fanjakan’Andriamanitra (Ezek. 36.25).
Nanohy izany fomba jiosy izany i Joany mpanao batisa ka nitaona ny Jiosy hatao batisa ao amin’ny onin'i Jordana mba ho voavela heloka (Mar. 1.4).
Ny batisa araka ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]
Nataon’ i Joany batisa i Jesoa tamin’ ny fanombohany ny asa fanompoany (Mar. 1.9-11). Tsy misy filazana ao amin' ny Filazantsara sinôptika fa i Jesoa koa nanao batisa. Ao amin' ny Filazantsaran'i Joany dia voalaza fa nanao batisa i Jesoa. Naniraka ny mpianany hitory teny amin’ ny firenena rehetra sy hanao batisa ny olon-drehetra izy mba ho mariky ny fahatongavan’ ny fanjakan’ Andriamanitra (Mat. 28.19). Araka izany, hatrany amboalohany dia fomba fidirana ho mpikambana ao amin’ ny fivavahana kristiana ny batisa.
Sahala amin’ ny batisan’ i Joany, ny batisa kristiana dia atao ho famelàna ny fahotan’ ny olona. Tamin’ ny fahatongavan’ i Jesoa, ny batisa natao tamin’ ny rano dia novana ho batisa ao amin’ ny Fanahy Masina. I Paoly dia nampianatra fa ny batisa dia fandraisan’ ny mino anjara amin’ ny fahafatesana sy ny fitsanganan’i Kristy ho velona. Izany no itiavan' ny fiangonana sasany manao batisa amin’ ny andro paska. Sakramenta ahazoana fanomezam-pahasoavana avy amin’ ny Fanahy Masina ny batisa (Asa 19.5-6; 1Kor. 12). Ho an' ny Kristiana ny batisa koa dia mariky ny fahafoizana tanteraka izao tontolo izao sy ny asan’ny nofo ary ny ratsy, sady fiombonana ao amin’ny Fanekem-Pihavanana Vaovao ao amin’ i Kristy.
Ireo endrika anatanterahana ny batisa[hanova | hanova ny fango]
Batisan-jaza sy batisan'ny mino[hanova | hanova ny fango]
Ny batisan-jaza[hanova | hanova ny fango]
Maro ny fiangonana kristiana izay manatanteraka ny fanaovam-batisa ny zazakely. Ny fiangonana katôlika, ny fiangonana loterana, ny fiangonana nohavaozina, ny fiangonana ôrtôdôksa sy ny maro hafa dia manatanteraka fanaovam-batisan-jaza.
Teo amin' ny tantara dia nanohana izany fanaovana batisa ny zaza izany i Zwingli ka tsy nifanarahany tamin' ny Anabatista izany, ka nilazany fa tsy misy lalàna mandrara ny fanaovana izany. Nanazava i Zwingli fa ny batisa dia famantarana ny fanekem-pihavanana amin' Andriamanitra, ka misolo ny famorana ao amin' ny Testamenta Taloha.
Ny batisan'ny mino[hanova | hanova ny fango]
Ny batisan'ny mino dia fanao kristiana iainan' ny mpino ny fanavaozam-panahy izay anapahany hevitra mba hatao batisa anatsobohana ny vatana anaty rano aorian'ny fanambaràny ny finoany, aorian' ny fahateraham-baovao. Isan' ireo zavatra amantarana indrindra ny kristianisma ara-pilazantsara izany. Fanaovam-batisa ny olona efa mpianatra no azo atao ka noho izany dia tsy mety ny manao batisa zazakely izay mbola tsy mahay mino. Ny olon-dehibe noho izany no tokony hatao batisa noho izy efa mahalala ny zavatra inoany.
Batisan' ny rano sy batisan' ny Fanahy Masina[hanova | hanova ny fango]
Batisan' ny Fanahy Masina[hanova | hanova ny fango]
Ny batisan' ny Fanahy Masina (na batisa ao amin' ny Fanahy Masina) dia ny fiainana ny fanavaozam-panahy izay anaovan' ny Fanahy Masina batisa ny olona iray. Ao amin' ny Filazantsaran' i Matio dia voasoratra fa nanao batisa tamin'ny rano i Joany, nefa nanambara io evanjely io fa ho avy ny fotoana izay hisian'ny batisan' ny Fanahy Masina, izay hotanterahin' ny olona lehibe noho izy. Azon' ny Apostoly tokoa tamin' ny andro Pentekosta (na Pantekôty) izany Fanahy Masina izany, araka ny Asan' ny Apostoly.
Ao amin' ireo fiangonana evanjelika dia miovaova arakaraka ny firehana na ny fikambanana ny atao hoe "batisan' ny Fanahy Masina". Mety hiseho amin' ny alanan' ny fanaovana fiteny tsy fantatra izany, na fahazoana ny iray na maro amin' ireo fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy Masina miisa valo hafa toy ny fahendrena, ny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny faminaniana, ny fahaiza-manavaka fanahy samihafa ary ny fahaizana mandika teny. Aorian' ny batisan' ny rano io batisa io matetika nefa koa mety hiara-miseho aminy na hialoha lalana azy.
Fanasan' ny Tompo
Batisa ho an' ny maty (môrmônisma)
Ny sakramenta ao amin' ny fivavahana katôlika:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Batisa&oldid=1014553"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 12:30 ity pejy ity.